ဂျိုကာ၂၀၁၉ ရုပ်ရှင်နဲ့ လှုပ်ခတ်ရစ်ခွေကျန်ရစ်စေခဲ့တဲ့ သိစိတ်အလျင် ဂယက်လှိုင်းများ – DVB
ဂျိုကာ၂၀၁၉ ရုပ်ရှင်နဲ့ လှုပ်ခတ်ရစ်ခွေကျန်ရစ်စေခဲ့တဲ့ သိစိတ်အလျင် ဂယက်လှိုင်းများ
ဂေါ်သမ်မြို့ကြီးလို့ DC Comics ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းထဲမှာ အမည်ပေးထားတဲ့ နယူးယောက်မြို့ကြီးရဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ ဗလပွနဲ့လမ်းကြားတနေရာမှာ အာသာဖလက်ဟာ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့ အမှိုက်ထုပ်တွေကို ဆဲဆိုအော်ဟစ်ပြီး ပေါက်ကွဲကန်ကျောက်ထိုးကြိတ်နေတယ်။ သူအလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပြီ။ နဂိုကတည်းက ဆင်းရဲကျပ်တည်းလှတဲ့ ပိန်လှီခြောက်ကပ် အာဟာရမပြည့်လှတဲ့ အာသာဟာ သူဘာမှအပြစ်မကျူးလွန်ရဘဲ အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ပြီ။
ဂေါ်သမ်မြို့ကြီးဟာ ရက်စက်လွန်းတယ်။ ကြွယ်ဝတောက်ပြောင်လင်းလက်နေတဲ့ ဂေါ်သမ်မြို့ကြီးဟာ နာနာကျည်းကျည်း သူ့အော်သံကို မကြားပါဘူး။ အဖက်လုပ် နားထောင်မနေပါဘူး။ စာနာထောက်ထားသူ ကင်းမဲ့တဲ့ အမှောင်ရိပ်လမ်းကြားထဲမှာ သူဟာ တယောက်ယောက်ကို သတ်ဖြတ်ထိုးကြိတ်ချင်စိတ်တွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီး ဝင်ငွေစံချိန်ချိုးခဲ့တဲ့ အပြင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ဇာတ်ကား၊ ဂီတ အော်စကာအကယ်ဒမီ၊ ရွှေကမ္ဘာလုံး ထူးချွန်ဆုတွေ သိမ်းကျုံးဆွတ်ခူးရယူသွားခဲ့တဲ့ Joker 2019 ရုပ်ရှင်ထဲကဇာတ်ဝင်ခန်း မြင်ကွင်းတခု။
သူ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်တယောက်က ပေးတဲ့ သေနတ်ကိုလက်ခံယူလိုက်မိလို့ သူ့ကိုယ်သူ အပြစ်တင်ချင်သလား၊ ကလေးဆေးရုံမှာ ဂျိုကာလို ဟာသလုပ်ရင်း ကပြဖျော်ဖြေရင်း အဲဒီသေနတ်ထွက်ကျမိရာက အလုပ်ပြုတ်တဲ့အဖြစ်ကို စိတ်နာနေတာလား၊ နဂိုကတည်းကမှ ဆင်းဆင်းရဲရဲ လူတန်းစားတယောက်ကို အလွယ်လေး အလုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့ စာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့ သူ့မန်နေဂျာအပေါ် ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲမိတာလား၊​ အကြင်နာတရားခေါင်းပါးလွန်းတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတခုလုံးရဲ့ အပစ်ပယ်ခံလူသားတယောက်ဟာ လူ့ဘောင်စည်းကမ်းတွေရဲ့ အပြင်ဘက်ကို မောင်းထုတ်ခံရတဲ့ဘဝကို နာကျည်းမိလေသလား၊​ သူ့ကိုယ်သူ စိတ်ရှိလက်ရှိ ဖွင့်ထုတ်ပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူဟာ အရုပ်ကြိုးပြတ်လဲကျသွားလေရဲ့။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆယ်လိုတယောသံဟာ ရူးချင်ချင် ကြောင်ချင်ခင်ဖြစ်လောက်အောင် ချောက်ချား သွေးပျက်ဖွယ်အတိ။
ပရိသတ်အတော်များများ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် Joaquin Phoenix ရဲ့ တသက်တာအကောင်းဆုံး အားထုတ်တင်ဆက်ပုံဖေါ်ထားတဲ့ ဇာတ်ရုပ်အာသာဟာ လူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ လူငယ်တယောက်။ စင်ပေါ်ကနေ လူတွေရယ်မော ပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့ ဟာသပြောသူ လူရွှင်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်တွေကို ဒိုင်ယာယီမှတ်တမ်းထဲမှာ ချရေးထားတဲ့ ဟာသဇာတ်ညွှန်းတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ လူငယ်တယောက်။​ စိတ်မမှန်တဲ့ အမေအိုကို ပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့ သားတယောက်။​ “My mother always tells me to smile and put onahappy face. She told me I hadapurpose: to bring laughter and joy to the world.” အပျော်မျက်နှာနဲ့ ပြုံးပြုံးလေးနေဖို့ သူ့အမေရဲ့ အမှာစကားကို အမြဲကြားနေတတ်တဲ့ လူငယ်တယောက်။
လှောင်ရီသံနဲ့ ရယ်မောမိရင် ပြန်ရပ်တန့်လို့မရလောက်အောင် မောပန်းနွမ်းနယ် ခြေကုန်လက်ပန်းကျထိ အဆက်မပြတ် တားမနိုင်ဆီးမရ ရယ်မောနေရတတ်တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ရောဂါတခု ခံစားနေရတဲ့ လူငယ်တယောက်။ လူပြက်မျက်နှာဖုံး အဝတ်အပြည့်စုံနဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင် ကခုန်ရင်း ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ပေးရတဲ့ အလုပ်သမားတယောက်ဟာ ငကြောင်လို့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေက သတ်မှတ်ခံရတဲ့ကောင်။​
ပလက်ဖေါင်းလူဆိုးချာတိတ်တသိုက်ဟာ အာသာရဲ့ လက်ထဲက ဆိုင်းဘုတ်ပြားကို လုယူထွက်ပြေးကြတယ်။ ပြေးလိုက်ပြန်တောင်းတဲ့ အာသာကို လမ်းကြားထဲမှာ ဝိုင်းထိုး ကန်ကြောက် အနိုင်ကျင့်ကြတယ်။ သူလုပ်ကိုင်စားသောက်ရတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ပြားဟာ ဖျက်ဆီးခြေမွခံလိုက်ရတယ်။ ချာတိတ်တသိုက်ရဲ့ ပျော်စေပြက်စေ အမှတ်မထင် ရမ်းကားမှုကြောင့် အာသာတယောက် အလုပ်ပြုတ်တဲ့အထိ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့စေတယ်။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တယောက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အာသာလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့ သေနတ်တလက်ဟာ အာသာရဲ့ ဘဝတခုလုံးကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။
မြေအောက်ရထားထဲမှာ မိန်းကလေးငယ်တယောက်ကို လူငယ်အမူးသမားသုံးယောက်က ရန်စအနိုင်ကျင့်နေတာနဲ့ ကြုံလိုက်ရတဲ့ညတည သူ့အိတ်ထဲမှာ လူသတ်လက်နက်တခုပါလာတဲ့ ညတည။​ သူ့ရဲ့ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ လှောင်ရီသံ ပြဿနာအကြောင်း လူရမ်းကား ၃ ယောက်ကို ရှင်းပြချိန်မရလိုက်ဘူး။ နှိပ်စက်ကန်ကျောက် ရန်ပြုခံရတဲ့ညတည ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်ရင်း လူငယ်၃ယောက်ကို ပစ်သတ်လိုက်မိတဲ့ ညတညဟာ သူ့ဘဝကို ပက်ပက်စက်စက် ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။
သေနတ်တလက်ကို လက်ထဲမှာကိုင်ထားရင်း သွေးပျက်ချောက်ချားနေတဲ့ အာသာ တသက်လုံး အနိုင်ကျင့်ခံ အထုအထောင်းခံနေခဲ့ရတဲ့ ဘယ်သူ့အကာအကွယ်မှမရခဲ့ဖူးတဲ့ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ် အရိုးငေါငေါ ပိန်ကပ်ကပ်အာသာ၊ လူရွှင်တော် ဂျိုကာမျက်နှာ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ထားတဲ့ အာသာ လူသတ်သမားအသစ်စက်စက် တယောက်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ အရသာတခုကို ပက်ပင်းကြုံလိုက်ရတဲ့ အာသာရဲ့ ပွေလီရှုပ်ထွေးတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတခုကို ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ အားလုံး မျှဝေခံစားဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့။
၃လောင်းပြိုင် ပစ်သတ်မိခဲ့တဲ့ ရထားဘူတာရုံလေးထဲက ကြောက်အားလန့်အား ပြေးထွက်လာခဲ့တဲ့ အာသာဟာ လမ်းဘေးအိမ်သာတခုထဲမှာ အာသာဟာ ကြောင်စီစီကကွက်တခုကို စိတ်ပါလက်ပါကနေခဲ့တယ်။ ရူးသွပ်ချင်လောက်စရာ ဆယ်လိုတယောသံက လွှမ်းခြုံပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ စိတ်ခံစားမှုဖြစ်စဉ်မှာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးက ပစ်ပယ်ထားတဲ့ အထီးကျန် တကောင်ကြွက် ဝေဒနာရှင် အာသာရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူသတ်သမားတယောက်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလာတာကို ထိတ်လန့်တကြား မြင်ရတွေ့ရပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Todd Phillips ဟာ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးရဲ့ အပယ်ခံလူသားတယောက်အကြောင်းတင်ပြရင်း လူသတ်ကောင်တယောက်ရဲ့ နာကျင်ကြေကွဲဖွယ် နောက်ကြောင်းတွေနဲ့ သွေးသံရဲရဲဇာတ်ရုပ်တခုကို ခင်ဗျားတို့ စာနာနားလည်လို့ မရနိုင်ဘူးလားလို့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ မေးခွန်းထုတ်လိုက်လေသလား။​
ဘာသာရေးအဆုံးအမတွေ လူကျင့်ဝတ်စံနှုန်းတွေ ယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းရဲ့ တရားဉပဒေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သိသိနဲ့ ပဲ ဆင်ခြင်တုံတရားတွေရဲ့ အမှောင်တဘက်ခြမ်းဟာ လူသတ်သမား ဂျိုကာဘက်က ရပ်တည်မိနေတယ်ဆိုတာ ဇာတ်ကားပြီးမှပဲ အလန့်တကြား သတိထားမိစေပါတယ်။ ဂျိုကာရဲ့ ရက်စက်တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေဟာ တရားတယ်။ ဒါမျိုးကတော့ သတ်ပစ်သင့်တယ် အာသာ၊ ဒီလိုကောင်စားတွေကို မင်းသတ်ပစ်တာ မမှားဘူးဂျိုကာလို့ ထုတ်မပြောရုံတမယ်ထိ ဖြစ်လောက်အောင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ဖြားယောင်းသိမ်းသွင်းသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ တသက်လုံး လူကြမ်းလူဆိုးလို့ နားလည်စာဖွဲ့ခဲ့ကြတဲ့ ခေါင်းဆယ်လုံးနဲ့ဒဿဂီရိ ဘီလူးရဲ့ မယ်သီတာအပေါ်ထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပစ်ကြွေခဲ့ကြသလိုမျိုး ဆရာချစ်ဦီးညို ရေးဖွဲ့တင်ဆက်ခဲ့ဖူးသလို ရက်စက်အန္တရာယ်များစွာ လှပကျော့ရှင်းနေတဲ့ အနုပညာဓာတ်သဘာဝများလား။​
ဂျိုကာဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတိုင်းကို မဲမဲမြင်ရာ သတ်ဖြတ်ချင်နေတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ တလောကလုံးမှာ သူ့အပေါ်ညှာတာ ထောက်ထားဆက်ဆံခဲ့တဲ့သူ လူပုကလေးဂယ်ရီကို သူမသတ်ပါဘူး။ “ You’re the only one that’s ever been nice to me.” သွေးစွန်းနေတဲ့ အာသာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် လူတယောက်ကိုသတ်ထားတဲ့ အာသာဟာ သူ့ကို ကြင်နာစွာနမ်းရှုပ်ရင်း အေးဆေးထွက်ခွာသွားခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ "It's okay, Gary. You can go. I'm not going to hurt you.” “You’re the only one that’s ever been nice to me.”
ရုပ်သံသတင်းတွေမှာ လူသတ်သမားဂျိုကာအကြောင်း လူသတ်မှုတွေအကြောင်း မြင်ရကြားရတဲ့အခါ တရားဉပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့ အခြေအနေကို စိတ်ပျက်နာကြည်းနေကြတဲ့ ဂေါ်သမ်မြို့သားတွေအားလုံးဟာ ဂျိုကာဘက်က ရပ်တည်လာကြတယ်။ ရဲတွေကို ဓာတ်ပျက်နေတဲ့ မြို့ခံလူထု အောက်ခြေလူတန်းစား ထောင်ပေါင်းများစွာဟာ ဂျိုကာရဲ့ လူသတ်မှုတွေကို ထောက်ခံနေကြတယ်။ ဂျိုကာဟာ သူတို့ကိုယ်စား သူတို့သူရဲကောင်းတယောက် ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာတယ်။ တမြို့လုံးမှာ ဆူပူအုံကြွလာကြတာတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ အဓိကရုဏ်းနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဉပဒေကို အာခံဖီဆန်မှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနေတာတွေကို ပြတဲ့ရိုက်ချက်တွေက အမေရိကန်လို နိုင်ငံမျိုးမှာတောင် တရားဉပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ လူယဉ်ကျေးလောကရဲ့ မူဘောင်တွေဟာ ခနော်ခနဲ့ တည်ရှိနေခဲ့ကြသလား။ ဉသြဆွဲသံတွေနဲ့ မောင်းနှင်သွားကြတဲ့ ရဲပတ္တရောင်ကားတွေကြားမှာ ဂေါ်သမ်မြို့သားနင်းပြားတွေဘဝဟာ လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေပုံကို ဒါရိုက်တာ Todd Phillips က ပြက်ရယ်ပြုသလို ဆန်ဆန်တင်ပြခဲ့တယ်။ တသက်လုံးပဲ ခေါင်းငုံ့ခံနေကြမယ့်အစား လက်တုံ့ပြန်ကြမလား၊​ ငါတို့မှာ ဘယ်သူရှိသေးလို့လဲ ငါတို့မှာ ငါတို့ပဲရှိတယ်လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ မြန်မာပြည် Gen Zee တွေကိုများ ရည်ညွှန်းနေလေရော့သလား။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေ ခေါင်းထဲမှာ မေးခွန်းရှတတတွေ ပလူပျံဆူညံကျန်နေရစ်ခဲ့စေပါတယ်။
မင်းသားကြီး Robert De Niro ရဲ့ ဇာတ်ရုပ် ရုပ်သံတင်ဆက်သူ“မာရေး” (Murray) ရဲ့ စာနာမှုကင်းမဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေကို မြင်ရကြားရတဲ့အခါ ဂျိုကာတဖြစ်လဲ အာသာကို သူနားမလည် သူမသိ သူမခံစားတတ်နိုင်တဲ့ မသိသားဆိုးရွားမှုကိုမြင်ရတဲ့အခါ “You are Awful” မင်းက အတော်ဆိုးရွားတဲ့ကောင်ပဲလို့ ဂျိုကာစိတ်နာနာနဲ့ ပြောလိုက်တာကို ရုပ်ရှင်ကြည့်သူဟာ လိုက်ပါသဘောတူနေမိစေတယ်။
“Have you seen what it’s like out there, Murray? Everybody just yells and screams at each other. Nobody’s civil anymore! Nobody thinks what it’s like to be the other guy.” အပြင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ မင်းသိလား မာရေး၊​ လူတိုင်းဟာ အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေကြတယ်။ မယဉ်ကျေးကြတော့ဘူး။​ လူတွေဟာ လူတဘက်သားရဲ့ ဘဝကို ဝင်ခံစား နားလည် မပေးတတ်ကြဘူး မာရေး။​ ရုပ်သံတင်ဆက်သူရဲ့ မေးခွန်းတွေ ဂျိုကာ အာသာပြောပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ရုပ်သံအစီအစဉ်တင်ဆက်သူကို မုန်းချင်ချင်ဖြစ်လာရတယ်။ တသက်လုံး ခေါင်းငုံ့ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေ ပြန်လည်လက်တုံပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါ လွယ်လွယ်လေး ပြစ်တင်ဝေဖန်တတ်ကြတဲ့ လောကကြီးကို ဂျိုကာက စွပ်စွဲလိုက်တယ်။
ဒါထက်မက ဇာတ်နာလှတဲ့ အာသာရဲ့ ပြောစကားတွေများစွာဟာ ရက်ပေါင်းများစွာ နားထဲမှာ ပဲ့တင်ကျန်နေရစ်စေပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ သူ့မှာ စိတ်မမှန်တဲ့ အမေရှိတယ်၊ ဖခင်တယောက်လည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကြားက ရုန်းထဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဖူးတဲ့ ဂျိုကာ။ “I used to think that my life wasatragedy, but now I realize, it’sacomedy.”တဲ့။
ရပ်တန့်လို့မရတဲ့ ခြောက်ကပ်ကပ်ရယ်မောသံနဲ့ တလောကလုံးရဲ့ အပစ်ပယ်ခံဂျိုကာဟာ သူ့ဘဝကိုသူ ဇာတ်နာလိုက်တာလို့ ခံစားခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ်တော့ ဟာသပါပဲလို့ ငိုသံပါနဲ့ ရယ်မောရင်း တုံ့ပြန်တတ်လာခဲ့တယ်။ အားလုံးကိုပျော်စေချင်တဲ့ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်လူငယ်တယောက်ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ လောကကြီးကို အဆိုးမြင်တွေပဲ တွေးနေမိပါတော့တယ်တဲ့။ ဇာတ်လမ်းတခုလုံးမှာ မကြာခနမြင်မြင်နေရတဲ့ သူ့လက်ရေးထဲက ငါရှင်သန်နေတာထက် ငါသေသွားတာက ပိုသဘာဝကျပါတယ် “I hope my death makes more cents than my life.” ဆိုတဲ့ စာတန်းဟာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ကို သွေးပျက် ချောက်ချားကျန်ရစ်စေခဲ့ပါတယ်။
Joker (2019) ဇာတ်လမ်းမှာ ရုပ်ရှင်နည်းပညာတွေ၊ တင်ဆက် ရိုက်ကူး တည်းဖြတ်ပုံ အရုပ်အသံ အလင်းအမှောင်ကိုင်တွယ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံသဘောတရားတွေ၊ ဂီတပံ့ပိုးမှုနည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အားနည်းတာတွေ အားသာတာတွေအကြောင်း ရုပ်ရှင်ပညာရှင်တွေဘက်မှာ ပြောဆိုဆွေးနွေးစရာတွေ ရှိနေနိုင်ပေမဲ့ ဒီနေရာမှာတော့ လူသတ်သမား ဂျိုကာတဖြစ်လဲ စိတ်ဝေဒနာရှင် အာသာဖလက်ကို ကြမ္မာငင်တဲ့ လူသားတယောက်လိုပဲ မှတ်မှတ်ရရ စာနာခံစားရင်း နောက်ဆက်တွဲ လှုပ်ခါရစ်ခွေကျန်ခဲ့တဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ တွေးတောဆင်ခြင်ကြည့်ချင်စရာ အနုပညာနဲ့ အဘိဓမ္မာလှိုင်းလုံးတွေအကြောင်းကိုပဲ သီးခြားခွဲထုတ် ပြောပြလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်းစိန်ထောင်မှာ အပြစ်မဲ့စွာ ဖမ်းဆီးခံအကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး အမြန်ပြန်လည်လွတ်မြောက်စေဖို့ ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြဖို့၊ သူ့ကိုမေ့မထားကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါရစေ။